TMunifi ရဲ့ wireless passw၀rd ပြောင်းနည်း ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
7:41:00 AM Tutorial6comments
ကွန်ပျူတာကို router ကနေ cables နဲ့ ချိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်mozilla firefox ကနေ
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ၀င်လိုက်ပါ..။IP နံပါတ်ကတော့ router ရဲ့ဘူးခွံမှာ ပါပါလိမ့်မယ်။ပြသနာမရှိပါ 192.168.0.1 နဲ့ပဲဝင်ကြည့်ပါ..။
အခုလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်..။ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း Username မှာ admin လို့ရိုက်ပြီး login ၀င်လိုက်ပါ..။password ထည့်စရာမလိုပါ..။
router settings ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း wireless settings ကိုရွေးလိုက်ပါ..။
ကျလာတဲ့ အထဲက wireless network setpu wizard ကိုဆက်ဝင်လိုက်ပါ။
ကျလာမဲ့အထဲက အလယ်က Manually assignanetwork key ရွေးပေးလိုက်ပါ။
အဲဒီမှာပေါ်လာတဲ့ wireless security password နေရာမှာ အရင်အဟောင်းကိုဖြတ်ပြီး ကိုပေးချင်တဲ့ အသစ်နဲ့ အစားထိုးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Next ကိုထက်နှိပ်ပြီး နောက်ဆုံးအဆင့် save လုပ်လိုက်ရင် TMunifi ရဲ့ wireless passw၀rd ပြောင်းခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ..။ အဆင်မပြေရင် စာရေးထားခဲ့ပါ..။ကျနော်နားလည်သလောက်ရှင်းပြပေးပါ့မယ့်..။
sadap badan October 10, 2014 at 11:10 AM
bro in malaysia ke?
im in damansara damai 0169954391
ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း November 18, 2014 at 7:42 AM
ကျနော်က puchong မှာ နေပါတယ်..ဖုန်းနံပါတ် မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်..အဲဒီဘက်ရောက်ရင် ခေါ်မယ်နော်..
Kyaw Thu Ya October 10, 2014 at 12:29 PM
​နောက်​ဆုံးအဆင့်​ အရင်​ password အ​ဟောင်းကိုဖျက်​ပါဆိုတဲ့​နေရာမှာ အရင်​ password အ​ဟောင်းကို မြင်ရ ဖတ်​လို့ ရပါသလား။ဆိုလိုတာက အရင်​ password အ​ဟောင်းကိုဘယ်​လိုကြည့်​ရတယ်​ဆိုတာသိချင်​လို့ပါ။​တကယ်​လို့ အရင်​ password အ​ဟောင်း မြင်လို့မရ ဖတ်​လို့မရ​ ဘူးဆို၇င်​ အရင်​ password အ​ဟောင်းကို ဘယ်​လိုကြည့်​ရလဲဆိုတဲ့နည်း ​လေး တင်​ပြ​ပေးရန်​ ​တောင်းဆိုပါတယ်​။​ကျေးဇူး ကမ္ဘာပါ။
ဒါ အရင် Router အဟောင်း Setting ထင်ပါတယ်.. .. အခုအသစ်က မတူတော့ဘူးထင်တယ်နော်.. .. Password တော့အသစ်မှာလဲ ပြောင်းလို့တော့ရပါတယ်.. ..ဒါပေမယ့် MAC Address တွေကို Control လုပ်ဖို့ကျတော့ အရင်လိုမလွယ်တော့သလိုပဲ.. .. အကယ်လို့အဆင်ပြေမယ်ဆို Router အသစ်ရဲ့ အခြား Function ... Setting လေးတွေပါရေးတင်ပေးပါလားခင်ဗျ.. .. ကျေးဇူးပါ..
Phyo Thurain April 8, 2015 at 6:27 PM
P1 password ပြောင်းတဲ့နည်းလေး ပြောပြပေးပါလား ခင်ဗျား
Zaw Tun April 22, 2016 at 11:39 AM
192.168.0.1 ဝင်လို့မရဘူ ဆရာ